Dalka Sacuudiga: Waxaan madadaalada ku maalgelin doona $6-4bn | Dalka Sacuudiga: Waxaan madadaalada ku maalgelin doona $6-4bn | Hal Sheegaha La Hubo
Dalka Sacuudiga: Waxaan madadaalada ku maalgelin doona $6-4bn
Dalka Sacuudiga, ayaa sheegay inuu ku maal galinayo $64 bilyan, siduu u horumarin lahaa qeybta madadaalada, tobanka sano ee soo socoto.
Madaxa guud ee qeybta madadaalada, ayaa tilmaamey in 5,000 oo xafladood la qorsheeyey qabashadooda sanadkan, oo ay ku jirto ciyaarta qalama rogadka.
Maalgelintan waxey qeyb ka tahay barnaamij ujeedadiisu tahay isbadal bulsho iyo mid dhaqaalaba, oo loo yaqaanno Hiigsiga 2030-ka, oo uu soo saarey labo sano kahor dhaxal sugaha Maxammed bin Salman.
Dhaxal sugaha oo da’diisu tahay 32 sano jir, ayaa doonaya inuu keeno qaab kale oo boqortooyadu daqli kusoo galo, oo aan ka aheyn kan shidaalka. Ilaha uu ku han weyn yahayna waxaa ka mid ah kordhinta qarashyada lagu bixiyo hannaanka dhaqan iyo madadaalo ee dalka.
Bishii December, 2017, Dowladda ayaa joojisay xanibaaddii saarneyd ka ganacsiga goobaha madadaalada sida shineemooyinka.
Madaxa guud ee hey’adda madadaalada Ahmed bin Aqeel al-Khatib, ayaa yiri: “Waayadii hore, maal geliyayaasha way la tagi jireen dhaqaalahooda dibadda, dadabadeedna way ula soo noqon jireen wax soo saarkooda dalka Sucuudiga.
“Maanta, taasi is badal ayaa ku dhici doona, wax waliba oo la xiriiro madadaalana halkan baa lagu sameyn doonaa.”
“Haddii Alle idmo, waxaad arki doontaa is badal dhab ah marka la gaaro sanadka 2020-ka.”
Magaalo weyn oo loogu tala galey madadaalada una dhaw Riyadh, qiyaas ahaanna la eg Las Vegas, ayaa kal hore la bilaabey dhismaheeda, iyadoo loogga gol leeyahay in sare loo qaado qeybta dalxiiska.
Waxaa horay u dhacay qeybo kaloo is badalo ku ah Boqortooyadan muxaafidka ah ee kutaal Gacanka Khaliijka, oo ay kamid yihiin in loo oggolaaday haweenka taageerayaasha ah daawashada kulamada ciyaaraha, iyadoo taasi ay dhacdey bishii hore, iyo ku dhawaaqista in haweenka loo oggolaado kaxeynta gawaaridda bisha June ee soo socota.
doonayo inuu ka dhigo Sucuudiga dal Islaam qunyar socod ah, una furan dhammaan diimaha oo idil, dhaqamaha iyo dadka”
Boqolkiiba toddobaatan shacabka waa dad kayar 30, waxeyna doonayaan in noloshoodu lagu dabaqo diintooda kudhisan duqaadka, iyo dhaqankooda naxariista”, ayuu yiri.